ओली सरकारले भर्खरै गर्यो एउटा महत्वपूर्ण निर्णय – Jagaran Nepal
ओली सरकारले भर्खरै गर्यो एउटा महत्वपूर्ण निर्णय
काठमाडौं । सरकारले भदौ १ बाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भदौ १ देखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आज सरकारका प्रवक्ता मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिए ।
विद्यालय निर्मलीकरणको कार्यढाँचा बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको र साउनभर शिक्षकहरुलाई विद्यालय पुगिसक्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले १ भदौबाट लागू गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरिरहँदा सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाको पछिल्लो भनाई सार्वजनिक भएको हो । १ भदौबाट विद्यालय भर्ना शुरु गरिएको जानकारी दिइसकिएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी लकडाउन अगावै ५ भदौबाट सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय अनलाइन कक्षा सञ्चालनको कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेकोमा १ भदौबाट भर्ना गरेर सञ्चालन गर्न लागेको हो ।